Araka ny vinavinan’ny mpamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrianomby, ho betsaka ny rotsak’orana, ny 9 sy ny 10 janoary 2019 any Sambirano sy any amin’ny ny faritra atsimo iray manontolo. Misy ny andian-drahona matevina mitondra orambe ao avaratra atsinanan’i Madagasikara ary midadasika izany. Efa nisy ny orana tamin’ireo faritra ireo ary mbola hitohy ka noho izany, mila mitandrina amin’ny mety ho vokany ny mponina.
Nanomboka niverina an-dakilasy ireo mpianatra, hatry ny omaly. Miditra amin’ny telo volana faharoa ny fampianarana amin’izao fotoana izao. Tsy hisy ny fihatoana raha tsy any amin’ny fialan-tsasatry ny Paska amin’ny volana avrily. Herin’ny fampianarana ny telo volana faharoa ka mitaky ny fifantohan’ny mpianatra sy ezaka mafy. Eo no hanenjehana ny fahavitan’ny fandaharam-pianarana rehetra.
Fanentanana fanaovam-baksiny miaro amin’ny aretina kitrotro ho an’ny zaza sivy volana ka hatramin’ny sivy taona ny 14-15-16-17-18 janoary 2019 ho avy izao ho an’ny distrikan’Ambatondrazaka, ny distrikan’Amparafaravola, ny distrikan’i Moramanga, ny distrikan’i Toamasina I sy II, ny distrikan’i Maevatanàna, ny distrikan’i Marovoay, ny distrikan’i Mahajanga I, ny distrikan’Antalaha, ny distrikan’i Morondava, ny distrikan’Ambatolampy, ny distrikan’Antanifotsy, ny distrikan’Antsirabe I sy II, ny distrikan’Ambositra, ny distrikan’i Fianarantsoa I, ny distrikan’i Toliara I, ny distrikan’i Tsiroanomandidy, ny distrikan’Arivonimamo, ny distrikan’Ambohidratrimo, ny distrikan’Andramasina, ny distrikan’i Manjakandriana, ny distrikan’ Antananarivo Renivohitra, ny distrikan’Atsimondrano, ny distrikan’Avaradrano.